Ciidamadii Uganda looga dilay weerarkii baaralamanka oo dalkooda loo qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamadii Uganda looga dilay weerarkii baaralamanka oo dalkooda loo qaaday
29th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Saddex ka mid ah askarta ciidamada Uganda ee qeybta ka ah AMISOM oo lagu dilay qaraxyadii iyo weerarkii Alshabaab sabtidii ku qaadeen xarrunta golaha shacabka Soomaaliya ayaaa dalkooda loo qaaday.
Xaflad lagu sagootinayey meydadka ciidamadan reer Uganda oo lagu qabtay xerada Xalane ayaa taliye ku xigeenka ciidamada howlgallada AMISOM ee Uganda ka socda, Maj. Geoffrey Muheesi wuxuu ku ammaanay ciidamada geeriyooday in ay dhinteen iyagoo difaaca xarunta baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxay ku dhinteen askartan waajib; iyagoo u dhintay dadka Soomaaliyeed,” ayuu yiri Maj. Geoffrey Muheesi.
Sidoo kale, wuxuu xusay taliyaha in askartaasi muujiyeen geesinimo iyo inay ka go’an tahay inay difaacaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna tacsi u diray qoysaskii askartaasi ka geeriyoodeen.
Weerarka Alshabaab sabatidii tegay ku qaadeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay saddex askarta waddanka Uganda ka tirsan, afar askari oo Soomaali ah iyo sarkaal booliis ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon qof oo ay ku jireen 3 xildhibaan oo golaha baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan.
Sidoo kale, waxaa weerarka lagu dilay ku dhawaad 10 ka tirsan Alshabaab, kuwaasoo qaarkood is qarxiyeen, qaar kalana ay toogteen ciidamada amaanka oo si dhaqsi ah ugu gurmaday goobta weerarku ka dhacay.
Jen. Indhaqarshe: Alshabaab guul ma gaarayaan oo nin gardaran ma guuleysto
Khilaafka xisbiga Kulmiye oo sababay xarriga xildhibaano deegaan